Uncategorized | | पृष्ठ 2
बुढासुब्बा,दन्तकालि र पिण्डेश्वरीको दर्शन + केही पहिला अनुभवहरु (paudelpadamprasad)
Posted on जुन 3, 2015 by Padam Prasad Paudel	• १ टिप्पणी
आज २०७२-जेष्ठ-१९गते मङ्गलबारका दिन करिव ११ बजेतिर मेरो एक जना साथी दिलिप दाई र म भएर बुढासुब्बा, दन्तकाली र पिण्डेश्वरी घुम्न जाने योजना बनाएर तिनकुनेबाट भानुचोक हुदै ४ किलोमीटरको पैदल यात्रा पछि बुढासुब्बा मन्दीर पुग्यौ । बुढासुब्बा मन्दिर कृतिम रूपमा एकदम भब्य र आकर्षक नबनाईएता पनि यहाको प्राकृतिक सुन्दरता र यहाको छुट्टै धार्मिक महत्वका कारण … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
Posted on मे 30, 2015 by Padam Prasad Paudel	• टिप्पणी छोड्नुहोस्
०७२ साल नेपालको लागी कालो बर्ष त्यसमाथी पनि जेठको महिना चर्को घाम गर्मिले ठाउठाउमा धेरै मानिस मरेका। पूर्वतिर भने हल्का पानी पर्थ्यो तर पश्चिमतिर भने पूरा ठ्याम्मै थियो । भूकम्पको कारणले पढाई अवरुद्ध भएपछि म लगायत सबै साथी घर गएका थियौ। जेष्ठ ९ शनिवार अधिकतम तापक्रम ४२ डिक्री सहनु परेको थियो । त्यसैदिन राति पूर्वी … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
→••भुकम्पसम्बन्धी एउटा गित डाउनलोड गर्नुहोस••←
→••भुकम्प सम्बन्धी एउटा गीत डाउनलोड गर्नुहोस••← ——————————————— सुने खबर ठुलै बिपत पर्यो अरे मेरो गाउमा आफू भने रुदैरुदै बसेको छु बिरानो ठाउमा गोठमा भको माली गाई नी हप्पा गर्दै मर्यो अरेे मेरो सानो झुपडी थ्यो भुकम्पमा पर्यो अरे रुदै भन्छन बाबुआमा खाको छैन लाको छैन यस्तो बेला घर फर्कन मैले छुट्टी पाको छैन (धिक्कारै छ … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
Padam Prasad Paudel मा पहिलो पटक घर छोडेर हिड्दा ( मु…
aakashpun45 मा पहिलो पटक घर छोडेर हिड्दा ( मु…
paudelpadamprasad मा गद्य कविता ‘दया’ २…
paudelpadamprasad मा झ्याउरे लयमा ‘के गर के न…
bg मा गद्य कविता ‘दया’ २…
एक सातापछि खुल्यो खुर्कोट–घुर्मी सडक जुलाई 20, 2019
४ साउन, सोलुखुम्बु । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत खुर्कोट–घुर्मी सडक एक सातापछि खुलेको छ । अविरल वर्षाको कारण असार २६ गते रातिदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको सडक शुक्रबार बिहानदेखि खुलेको हो । करिब ६० किलोमिटर लामो यो सडकखण्डको धेरै ठाउँमा पहिरो खसेपछि आवागमन ठप्प बनेको थियो । सडकको विभिन्न ६ ठाउँको पहिरो पन्छाएपछि बिहीबार बेलुकादेखि एकतर्फी खुलाइएको […] […]
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनैपर्छ : देवेन्द्र पौडेल जुलाई 20, 2019
४ साउन, बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेलगायतका ५ बुँदे सहमति कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले सरकारको काम–कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्री परिवर्तन गर्नसमेत माग गरेका छन् । ‘सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो […]
लोकसेवाको प्रश्नपत्र च्यात्ने ४ जना पक्राउ जुलाई 20, 2019
४ साउन, काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि लोकसेवा आयोगले लिइरहेको परीक्षास्थलमा प्रवेश गरेर आदिवासी जनजाति कार्यकर्ताले शनिबार खोटाङमा प्रश्नपत्र च्यातेका छन् । प्रश्नपत्र च्यात्ने ४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर परीक्षा सुचारू गरेको छ । लोकसेवा आयोगले शनिबार बिहान ८ बजेदेखि प्रदेश १ का तीनवटा केन्द्रहरु खोटाङ, धनकुटा र इलाममा परीक्षा सुरू गरेको छ । […]
हवाई यात्रुबाट विकास शुल्क कहिलेसम्म असुल्ने ? प्राधिकरण आफैैं अन्यौलमा जुलाई 20, 2019
४ साउन, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट विमानस्थल विकास शुल्क (एडीएफ) उठाउन पाउने अधिकार ३१ असारबाट समाप्त भएको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेमा प्राधिकरण नै अन्योलमा छ । सरकारले प्राधिकरणलाई ५ वर्षका लागि यस्तो शुल्क लिने अधिकार दिएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरुले […] […]
उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक लगानी ३१ अर्बले घट्यो जुलाई 20, 2019
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन गरेकै वर्ष उद्योग विभागमार्फत मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा उच्च गिरावट देखिएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा वैदेशिक लगानी ३१ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढीले आरोलो लागेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल ३९९ वटा उद्योगमा ५५ अर्ब ७६ करोड ४ […] […]
१० वर्षमा नेपालले भारतलाई बेच्यो डेढ अर्बको बिजुलीे जुलाई 20, 2019
४ साउन, काठमाडौं । गत साता अविरल वर्षाका कारण देशभरको बिजुलीको माग आधा कटौती भयो । दैनिक १२ सय मेगावाटको माग ६ सय मेगावाटमा झर्दा खोलानदीमा पानीको सतह बढ्यो । कुलेखानीसहित देशभरका प्रायः सबै आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा चले । यसरी माग कम र आपूर्ति बढी भएपछि नेपालले करिब २ सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्‍याे । […] […]
रुपा गाउँपालिकाले नयाँ सडक नखन्ने, भएकामा धमाधम पिच जुलाई 20, 2019
४ साउन, पोखरा । तत्कालीन राजा महेन्द्र जीप चढेर गाउँ पुगेको सडक पिच हुने खबरले रुपा गाउँपालिकाका देउरालीवासी खुसी बने । बाटो खुलेको ६३ वर्षपछि गएको साउनमा पिच गर्न थालिएपछि रुपा र लमजुङदेखि पोखरासम्म आउजाउ गर्नेहरु उत्साही बने । अहिले त्यो बाटो धमाधम पिच भइरहेको छ । शिशुवा–पोल्याङटार अन्तर्गत १६ किलोमिटर यो सडक पिच भएपछि […] […]
सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस लिने सव–इञ्जिनियर रंगेहात पक्राउ जुलाई 20, 2019
४ साउन, सिरहा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले शुक्रबार सेवाग्राहीसँग लिएको घुससहित सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका सव–इञ्जिनीयर उमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । सेवाग्राहीसँग लिएको रु. ५० हजार घुससहित गोलबजारकै एक होटलबाट सव– इञ्जिनीयर श्रेष्ठलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो । सेवाग्राहीलाई होटलमा बोलाएर घुस लिएपछि सव–इञ्जिनीयर श्रेष्ठलाई रङ्गेहा […]
कुबेतमा अलपत्र महिला नेपाल फिर्ता जुलाई 20, 2019
४ साउन, काठमाडौं । दलालको प्रलोभनमा परी कुवेतमा बिचल्लीमा परेकी नुवाकोट, महाकाली गाउँपालिका कि अनु तामाङलाई नेपाल फर्काइएको छ । तामाङ राम्रो काम लगाइदिने आशमा छ महिनाअघि दलालको फन्दामा परी भारत हुँदै कुबेत पुगेकी थिइन् । तर, उनीमाथि शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको थियो । यसबारे तामाङले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेपछि सरकारले नेपाल फिर्ता प्रक्रिया […] […]
अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि अल्जेरियाको पोल्टामा, सेनेगल स्तब्ध जुलाई 20, 2019
४ साउन, काठमाडौं । अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि अल्जेरियाको पोल्टामा परेको छ । कायरोमा शुक्रबार राति भएको फाइनल खेलमा सेनेगललाई १–० गोलको अन्तरले स्तब्ध पार्दै अल्जेरिया च्याम्पियन बनेको हो । अल्जेरियाका लागि बग्दाद बोएनेजाले खेलको दोस्रो मिनेटमै गोलको खाता खोल्दै अग्रता दिलाएका थिए । सेनेगलका सालिफ सानेको गल्तीलाई भरपुर उपयोग गर्न सफल बग्दादको त्यही […] […]